Oromia Archives - Page 2 of 152 -
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 30, 2017 Kan arge osoo jiru, kan dhagahe himu malee jedhee bookkisuun waanuma jiru. Haasawaan bakki hin dhaqabamne hin jiru. Waan haasawan hojitti hiikuun garuu hin salphatu. Yeroo ammaa dhimmi FXG Qerroon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiru irratti yaadota gara garaa heddutu namoota gara garaan odeeffamaa jira. Abbichi many’aa osoo jiru […]